LG G7 ThinQ: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Tonga ny andro! Rehefa avy niandry ela, indrindra noho ny fizotran'ny fampandrosoana izay tsy mora, Ny LG G7 ThinQ dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy tany New York. Efa ho iray volana lasa izay no nanambaran'ny orinasa ity hetsika fampisehoana ity ho an'ny dingana farany vaovao. Finday iray izay niteraka fanantenana be dia be ary fantatray tsara amin'ny farany.
Ity LG G7 ThinQ ity dia mampanantena fa ho marika voalohany amin'ny marika. Ankoatr'izay, manampy ny fironana amin'ny tsena hampiasa ny faharanitan-tsaina, zavatra hita taratra amin'ny anarany. Amin'ity hetsika fampisehoana ity dia naseho izay rehetra momba ny telefaona. Inona no azontsika antenaina?
Voalohany indrindra dia hamela anao amin'ny famaritana ny LG avo lenta vaovao izahay. Mba hahazoanao hevitra mazava momba ny zavatra entin'ny orinasa anay. Hanampy antsika koa izany hahitantsika raha marina na tsia ireo fivoahana maro an-telefaona tato anatin'ny herinandro vitsivitsy.
1 Famaritana LG G7 ThinQ
2 LG G7 ThinQ: avo lenta ampiasain'ny faharanitan-tsaina
Famaritana LG G7 ThinQ
Ny marika dia nisafidy haavo avo lenta feno miaraka amin'ity maodely ity. Koa satria isika teo aloha sombiny tsara be amin'ity LG G7 ThinQ ity. Araka ny hitantsika fa ny orinasa dia niasa betsaka tamin'ity maodely ity. Ireto avy ireo fepetra arahana ara-teknika feno:
efijery: LCD LCD 6,1 miaraka amin'ny vahaolana QHD + (3.120 x 1440) ary tahan'ny 19,5: 9 ary HDR10
processeur: Snapdragon 845 oct-core Kryo
Fitahirizana anatiny: 64/128 GB + MicroSD hatramin'ny 2 TB
Fakan-tsary Rear: 16 MP solomaso zoro tena malalaka an'ny 107º misy aperture f / 1.9 + 16 MP zoro zoro malalaka 71º miaraka amin'ny vava f / 1.6
Fakan-tsary eo aloha: MP 8, f / 1.9
bateria: 3.000 mAh misy famahanana haingana sy famahanana tsy misy tariby
ny hafa: Mpamaky sidina aoriana, fanoherana rano IP68, Famantarana ny tarehy, bokotra IA, mpandahateny Boombox
lafiny: 153.2 x 71.9 x 7.9 mm
lanja: 162 grama
Amin'ny ankapobeny dia hitantsika izany Ity LG G7 ThinQ ity dia avo lenta. Volavola tena maoderina, miaraka amin'ny marika izay hanome be dia be horesahina eo amin'ireo mpampiasa, ary processeur matanjaka. Ny matanjaka indrindra eny an-tsena ankehitriny. Ka fampisehoana miavaka an-telefaona no antenaina amin'ity lafiny ity.
LG G7 ThinQ: avo lenta ampiasain'ny faharanitan-tsaina
Ny marika dia nisafidy ny hanavao ny famolavolana ny fitaovana. Mahita efijery lava kokoa isika ary miloka indray amin'ny frame tena tsara izy ireo, zavatra iray izay naha mpisava lalana azy hatramin'ny taona lasa. Na dia ny be indrindra aza no naneho hevitra tamin'ny efijen'ity fitaovana ity io no notch. Hatramin'ny LG dia resin'ny ody amina. Andininy iray izay miteraka resabe.
Amin'ity taona ity isika dia mahita ny fomba mahatonga ny fakantsary ho iray amin'ireo hevi-dehibe ao anatin'ny faritra avo lenta. Hita taratra indray izany amin'ny tranga LG G7 ThinQ. Nisafidy fakantsary roa sosona any aoriana izy ireo, miaraka amina sensor 16 MP roa. Zava-dehibe indrindra ny fisian'ny faharanitan-tsaina artifisialy amin'ny telefaona. Zavatra iray izay tsikaritra ihany koa amin'ny fakantsarin'izy ireo.
Satria miaraka amin'ny maody CAM AI izy io. Ity dia asan'ny fakan-tsary izay manitsy ny masontsivana fitifirana miorina amin'ny sehatra. Ho fanampin'izay, manana fomba 19 samy hafa ao anatiny izahay. Noho izany dia hampifanaraka amin'ny toe-javatra isan-karazany izy mba hahazoana ny sary tsara indrindra. Hanana sary mivantana koa izy io, izay maka horonan-tsary kely alohan'ny sy aorian'ny fakana ny sary.
Toy izany ny fanoloran-tena an'ity LG G7 ThinQ ity miaraka amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy, izayNy EU dia manana bokotra manokana ao amin'ilay fitaovana. Bokotra iray hanombohana ireo fiasa ireo, toa ny hoe Bixby amin'ny telefaona Samsung. Farafaharatsiny izany ilay fahatsapana avelany. Na dia amin'ity tranga ity aza, tsindrio ny bokotra Hanomboka ny Google Assistant sy ny Lens. Ka ny telefaona dia manatevin-daharana an'ity hetsika ity ary iray amin'ireo voalohany manana an'io asa io ho azy.
LG dia naneho hevitra betsaka momba ny telefaona tamin'ity hetsika fanombohana ity. Satria fantatsika ny pitsony feno. Mikasika ny famoahana ny LG G7 ThinQ amin'ny tsena dia nilaza fotsiny ny orinasa fa hahatratra ny tsena lehibe amin'ny herinandro ho avy. Amin'izany dia midika hoe Etazonia, Kanada, Eropa, Azia ary Amerika Latina izy ireo. Na dia tsy nanonona daty manokana momba izany aza izy ireo.
Tsy misy fantatra ny vidin'ny telefaona. Ka toa tsy maintsy miandry azy isika, sahala amin'ny daty famoahana azy. Heverinay fa mandritra ny volana Mey dia hisy zavatra havoakan'ny orinasa amin'ny fomba ofisialy. Ka tsy tokony ho ela loatra.
Ny efa voalaza dia hahita finday roa amin'ny telefaona isika, miankina amin'ny RAM sy ny fitehirizana azy. Ho tonga ny kinova iray miaraka amin'ny 4/64 GB ary ny iray hafa miaraka amin'ny 6/128 GB. Inona koa, hisy loko efatra hisafidianana: manga, volondavenona, mainty na mavokely. Ahoana ny hevitrao momba ity LG G7 ThinQ ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » LG G7 ThinQ: ofisialy izao ny ofisialy avo lenta